Ny hoavin'ny varotra B2B: ny fampifangaroana ireo ekipa anatiny sy ivelany | Martech Zone
Ny areti-mandoza COVID-19 dia nametraka ny vokatry ny tsimok'aretina manerana ny tontolon'ny B2B, angamba manodidina ny fomba fanaovana transakta. Mazava ho azy, ny fiatraikany amin'ny fividianana mpanjifa dia tena goavana, fa ahoana ny amin'ny orinasa amin'ny orinasa?
Araka ny Tatitra momba ny B2B Future Shopper 2020, 20% fotsiny amin'ireo mpanjifa no mividy mivantana amin'ireo solo-barotra, mihena amin'ny 56% amin'ny taona teo aloha. Mazava ho azy fa manan-danja ny fitaoman'ny Amazon Business, kanefa 45% amin'ireo valinteny fanadihadiana dia nitatitra fa sarotra kokoa ny mividy an-tserasera noho ny ivelan'ny Internet.
Midika izany fa ny fantsom-pivarotana nentim-paharazana mifangaro nirvana an'ny anatiny sy ivelany ekipa mpivarotra dia voakorontana be. Ecommerce izao dia fantsona tena ilaina miaraka amin'ireo orinasa mihazakazaka hanamora ny fividianan'ny mpanjifa amin'izy ireo amin'ny Internet, ny ekipa mpivarotra ao anatiny dia nanitsy haingana ny fanatanterahana ny asany tany an-trano, ary nisokatra hatrany ny sampana sy ny fivarotana raha heverina fa ilaina izany. Nanao izay ho afany ny mpiasan'ny varotra an-tsaha mba hanitsy haingana ny asany mahazatra amin'ny sidina mba ho azon'ny mpanjifany nefa tsy afaka miantso azy ireo mivantana.
Efa ho 90% ny varotra no nifindra tamin'ny maodely fivarotana videoconferencing / telefaona / tranonkala, ary na dia mijanona aza ny fisalasalana, mihoatra ny antsasaky ny mino fa mitovy na mahomby kokoa noho ny maodelin'ny varotra nampiasaina talohan'ny COVID-19.
McKinsey, Ny teboka fidinana nomerika B2B: Ny fiovan'ny varotra nandritra ny COVID-19
Ny hoavin'ny tontolon'ny varotra dia niova haingana teo ambanin'ny enta-mavesatry ny fikorontanana, fa ireo mpitarika raharaham-barotra mahay mandanjalanja dia manitsy in-dingana, amin'ny fampiasana analytics mialoha ny varotra mba hampifangaro ny varotra anatiny sy ivelany ary hanompo tsara kokoa ny mpanjifa tsirairay.
Fahafahana tsy voafafa ao amin'ny kaonty lava an'ny kaontin'ny mpanjifa
Ao anatin'ny orinasa B2B, ny 20% n'ny mpanjifa dia matetika ao amin'ny kaonty stratejika sokajy - ary misy antony marim-pototra.
Tsy fahita matetika ny 80% ny vola miditra dia azo alaina amin'ity ambaratonga ambony ity. Ara-drariny, ny repte varotra be fahalalana indrindra dia tendrena amin'ny fitazonana sy fampitomboana ireo fifandraisana ireo.
Rehefa mandeha ny fotoana, amin'ny alàlan'ny fiparitahan'ny vokatra na ny fampiraisana ary ny fahazoana dia mitombo amin'ny ambaratonga sarotra ny orinasa izay mangataka amin'ny solo'ny mpivarotra azy ireo handrakotra kaonty bebe kokoa nefa manaiky izany, amin'ny fanaovana izany, mpanjifa marobe tsy mahazo ny saina manokana ilainy. mitazona sy mampitombo ny fizarana kitapom-bola. Na izany aza, manoloana ny fikorontanan'ny COVID-19, dia mametraka ny fanontaniana hoe: Ohatrinona ny karama halainao amin'ny rambony lava?
Fikarohana avy amin'ny anay tatitra manara-penitra manerantany manondro fa ny fahafaha-misy azo omena hery ny solo-barotra dia mitazona sy mampitombo ny kaonty ao aminao misy manan-danja ny toeran'ny mpanjifa. Raha ny resaka churn mpanjifa sy ny varotra rehetra, ny orinasan'ny B2B dia tsy mahomby amin'ny 7% ka hatramin'ny 30% amin'ny vola azo.
Ampidino ny tatitra momba ny benchmark Global
Ny hoavin'ny varotra B2B: fampifangaroana ny varotra anatiny sy ivelany
Araka ny nomarihin'ny tatitra nataon'i McKinsey, ireo mpivarotra eo ivelany na any an-tsaha dia miasa tahaka ny mpiara-miasa aminy. Ny fotoana fitsangantsanganana sy fitsidihana ny kaontiny ambony dia manome fotoana vaovao sy azo averina an-tsaina ho an'ity ekipa mpivarotra mahay ity: Atodiho mankany amin'ny rambon'ny kaonty mpanjifa ny endriny varotra fotsy ary omena fahefana izy ireo hitondra ny mpanjifa tsirairay toy ny kaonty stratejika.
Ity rambony lava an'ny kaontin'ny mpanjifa ity, izay indraindray antsoina hoe kaontin'ny trano nozaraina, dia matetika no aroso rehefa mitsidika sampana na miantso rehefa mila zavatra. Ampiasao ny bandwidth misy ny ekipa mpivarotra ivelany amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo hetsika fitomboana sy fanarenana mba horaisina miaraka amin'ireo mpanjifa ireo. Ny analytics momba ny varotra mialoha dia mety hametraka haingana ireo fahitana ireo amin'ny ambaratonga, kaonty ho an'ny mpanjifa sy sokajy vokatra rehetra.
Fanadihadiana varotra mialoha mamorona hetsika fitomboana miaraka amin'ny siansa angon-drakitra mandroso mba hamoronana mombamomba ny modely fividianana modely mifototra amin'ny mpanjifa tsara indrindra amin'ny orinasa iray, amin'ny fandinihana ny lamina fandaniana, ny fandaniana tanteraka ary ny haben'ny vokatra novidiana. Amin'ny fampiasana algorithms mifototra amin'ny clustering sy affinity, dia mifanaraka amin'ny mpanjifa tsirairay amin'ny mombamomba ny fividianana akaiky indrindra izy ireo mba hitarika mivantana ireo reps amin'ireo entana izay tsy ividianan'ny mpanjifa… fa tokony.
Izy io koa dia manala sarona ny hetsika fanarenana amin'ny alàlan'ny famantarana ireo mpanjifa "atahorana" izay mampiseho fambara fihodinana amina sokajy vokatra iray na maromaro amin'ny alàlan'ny algorithma mandroso sy misy patanty mba hanompoana faritra manokana izay mihena ny vola miditra na very tanteraka. Mifanohitra amin'ny tatitra momba ny raharaham-barotra nentim-paharazana, ity fomba ity dia manafoana ny tabataba amin'ny alàlan'ny kaonty momba ny lamina mividy tsingerina, ny vanim-potoana, ny fividianana indray mandeha, na ny fitondran-tena mividy miovaova, mba hanilihana ireo fiheverana diso amin'ny fomba fijery fanarenana.
Ny analytics momba ny varotra mialoha dia efa be mpampiasa amin'ny orinasa B2B izay manana haingam-pandeha avo lenta sy fenoina, toa ny fizarana sakafo. Raha manana analytics mialoha ny varotra mialoha ianao, mora atao ny manao laharam-pahamehana ireo fomba fijery ireo mandritra ny rambon'ny kaonty any ivelany. Raha mbola tsy manana analytics momba ny varotra mialoha ianao, ny fanombohana dia mahitsy ary afaka miaina ao amin'ny orinasanao ao anatin'ny efa-bolana farafahakeliny.
Tags: b2bCoronavirusCovid-19ao anaty varotrafanidianavarotra ivelanyvarotra telefaonaanalytics momba ny varotra mialohafantsona fivarotanakaonty stratejikavideoconferencingvarotra tranonkalazilliant
Ny Anatomy amin'ny famakiana amin'ny taona 2020, ary ireo marika nanao izany